Mogadishu Journal » Dhaawaca Lewandowski waxaa laga yabaa rikoorka Muller inuu jabin waayo,xidigii hore ayaa yiri
Dhaawaca Robert Lewandowski waxaa laga yaabaa inuu dhaawac culus u geysto fursadiisa ah inuu jabiyo rikoorka Gerd Muller, Roy Makaay ayaa sidaas leh.
Robert Lewandowski ayaa lumin lahaa fursad uu ku jabinayo rikoorka gooldhalinta Gerd Muller ee hal xilli ciyaareed Bundesliga, weeraryahankii hore ee Bayern Munich Roy Makaay ayaa yiri.
Weeraryahanka reer Poland Lewandowski ayaa dhaawac jilibka ah kasoo gaaray ciyaartii isreebreebka Koobka Adduunka ee ay 3-0 kaga badiyeen Andorra, waxaana uu wajahayaa muddo bil ah oo uu garoomada ka maqnaan doono.
32 jirkaan ayaa seegi doona labada lug ee wareega 8da Champions League ee Paris Saint-Germain iyo inta badan kulamada horyaalka ee RB Leipzig, Union Berlin, Wolfsburg, Bayer Leverkusen iyo Mainz.
Isaga oo dhaliyay 35 gool 25-kii maalmood ee ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka Bundesliga, Lewandowski waxa uu u muuqday in uu la mid noqon doono Muller taariikhdiisii ​​caanka ahayd ee 40, oo dib loo dhigay 1971-72.
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego hoggaamiyeyaasha horyaalka kaliya seddex kulan ayaa harsan ka dib markii ay wajahayaan Mainz 24kii Abriil, Makaay wuxuu qabaa in rikoorku uu ka dhici lahaa meel ka baxsan gaaritaanka Lewandowski.
Ciyaaryahankii hore ee Netherlands ayaa sidoo kale ka walaacsan xulashooyinka uu heli karo tababare Hansi Flick marka ay timaado helitaanka bedel weeraryahan.
"Aniga ahaan, Lewandowski wuxuu ahaa weerar yahanka ugu fiican aduunka mudo sanado ah. Waxa uu ka sameeyo gudaha iyo banaanka xerada ganaaxa oo ah lambarka sagaalaad waa wax aan la rumeysan karin," ayuu u sheegay Spox.
"Xaqiiqdii ma sahlanaan doonto [hadda] in Lewandowski uu jabiyo rikoorka. Maqnaashahan war wanaagsan uma ahan Bayern. Bedelkiisa, waa inaad go'aankaas ku tiirsanaataa kooxaha ka soo horjeeda." Xashiishku wuu ka dhaqso badan yahay [Eric Maxim] Choupo-Moting. "
Si kastaba ha ahaatee, Makaay ayaa weli ku qanacsan in Lewandowski uusan weli wax badan u soo bandhigin Bayern xilliyada soo socda, isagoo soo jeedinaya inaysan jirin baahi degdeg ah oo la isku dayo in lala soo saxiixdo kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Makaay oo ka hadlaya xidigga reer Norway ayaa yidhi: “Qof kasta oo sidaas goolal u dhaliya da'daas waxa uu lahaan karaa mustaqbal weyn oo kaliya ka hor”. “Laakiin Lewandowski wali waxaa horyaalla dhowr sano oo aad u wanaagsan, waan hubaa taas.”
Makaay, oo laba jeer ku guuleystay Bayern laba jeer, wuxuu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro Lewandowski laakiin wuxuu kaloo aqoonsaday laba xiddig oo kale oo muhiim ah oo uu dareensan yahay inay noloshiisa ka dhigi lahayd weeraryahan fudud.
Isaga oo arintaas ka hadlaya ayuu yidhi ”aniga iyo Lewandowski xaqiiqdii waxaan samayn lahayn iskaashi fiican, laakiin sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in aan la ciyaaro nin sida Thomas Muller oo kale ah”.
"Qofka aan shakhsiyan u jeclahay waa Joshua Kimmich. Waxaad dooneysaa ciyaaryahan sidan oo kale ah oo kaa dambeeya oo ah weeraryahan. Waqtigeyga, waxaan heysanay Michael Ballack iyo markii dambe Schweini [Bastian Schweinsteiger] - ma aysan aheyn kuwo aad u xun, sidoo kale "